Uyembesa maduze umrepha wodumo | News24
Uyembesa maduze umrepha wodumo
Durban - Seziqinisekisiwe izindaba zokuthi isihlabani se-hip hop, uKwetsa, sisemalungiselelweni okuyokwembesa ingoduso yakhe, uYolanda Mvelase, ozalwa ngusomabhizinisi oyisikhulu samaNational Choral Music Achievement Awaward (Nacma), uVusi Mvelase.
UNhlawulo Baloyi, oyiRecord Executive aphinde abe yiBusiness Partner kwiRap Lyf Records ( Isitibele okuqopha kuso uKwetsa) nguye oqinisekise lezi zindaba ephephandabeni ILANGA leTheku, wathi umcimbi ungomhlaka 8 Ephreli.
OLUNYE UDABA: Kuvalwe amahhovisi akwaMTN eNigeria
“Ngingakusho ngingananazi ukuthi ngimenyiwe emembesweni kaYolanda Mvelase ozobe useThekwini.
Lo mcimbi uzobe uhlanganise imindeni yombili, owakwaMvelase nowakwaVilakazi, nabangani abasondelene nalezi zithandani,” kusho yena.
UKwetsa noYolanda kuthiwa sebeqede iminyaka ewu-8 bethandana kanti banengane eneminyaka emine ubudala.